Taliyihii hore ee NISA, oo weerar afka ah ku qaday Qoorqoor | KEYDMEDIA ENGLISH
Wuxuu xaqiijiyay in dhawaan Caasimadda lagu qaban doono, shirweyne lagu iclaaminayo bilowgaa howlahaas looga gol leeyahay Badbaadinta Galmudug laguna soo bandhigayo qorshaha iyo daladaha fulin doona.
MUQDISHO, Soomaaliya – Agaasimahii hore ee hay’adda sirdoonka iyo nabad sugida qaranka, Cabdiraxmaan Maxamuud Turyare, oo ka mid ahaa musharixiintii laga hor istaagay u baratanka xilka Madaxweynaha Galmudug 2020, ayaa Qoorqoor, ku eedeeyay inuu garab maray dhamaan howlihii hoggaamineed ee loo igmaday.
General Tuuryare, oo kaalin xooggan ku lahaa ololihii mucaaradku ku hakiyeen doorashooyinka iyo in Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, shaqada ka raacdeeyo xubno ka tirsan Golaha Xallinta Khilaafaadka, ayaa sheegay in maamulkii Galmudug uu gacanta u galay qof kor looga soo gamay oo dhaqan mooryaaneed leh, mas'uuliyadna aan qaadi karin, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Wuxuu xusay in Qoorqoor, garab maray, dhisidda hay'adaha Galmudg ee dastuuriga ah, dib-u-heshiisiin & isku soo dhaweynta bulshada, xoojinta amniga, xoreynta degaanada cadowgu weli heysto iyo horumarinta degaanka.
“Arimahaas bedelkoodana wuxuu ku mashquulsanyahay kala irdheynta bulshada Galmudug, abuuridda fitno, utumo, uur-gumaara siyaasadeed, burburinta hay'adiii Dastuuriga ahayd ee asiga dooratay (Barlamaanka), gacan-siinta argagixisada, isku dayga khaarajinta qaar ka mida siyaasiyiinta ka aragtida duwan, weeraridda culima udiinka deegaanka, burburinta ciidamadi amniga ee Galmudug iyo la dagaalanka waxgaradka Gal-mudug ee ahlul xali wal caqdiga ahaa”, ayuu yiri Tuuryare.
Wuxuu sheegay in wadatashi dheer oo qeybo ka mida waxgaradka reer Galmudug ay ku yeesheen Gobalka Banaadir, lagu go’aamiyay in la badbaadiyo Galmudug lana abaabulo bulshada reer Galmudug ee dalka iyo dibaddaba ku nool, si wax garadku uga warbixiyo meesha ay maanta mareyso Galmudug loona soo bandhigo qorshaha bilowga ololaha badbaadinta.
Wuxuu xaqiijiyay in dhawaan Caasimadda lagu qaban doono, shirweyne lagu iclaaminayo bilowgaa howlahaas looga gol leeyahay Badbaadinta Galmudug laguna soo bandhigayo qorshaha iyo dalladaha fulin doona.
KEYDMEDIA, ayaa hore u baahisay in Arbacada Muqdisho, looga dhawaaqi doono Madasha Badbaadada Dowlad Goboleedka Galmudug, taas oo ay xubno ka yihiin siyaasiyiin miisaan culus leh.
Cabdiraxmaan Maxamuud Turyare, wuxuu hore u soo qabtay xilalka Madaxa baarista xarunta Nabad-sugida qaranka ee magaalada Muqdisho, Taliyaha Maxkamada sare ee militariga iyo xilka Agaasimaha hay’adda sirdoonka iyo nabad sugida qaranka Soomaaliya.
Wuxuu qeyb ka yahay musharixiinta u tartamayay kursiga HOP067, kaas oo Qoorqoor u boobay eedeysane Yaasiin Farey, oo ka mid ah shaqsiyaadka ku eedeysan kiiska Ikaan Tahliil Faarax.
Ansixinta natiijada boobkii kursigaas, waxaa shaqadooda ku waayay todobo xubnood oo ka tirsan Guddiga Xallinta Khilaafaadka doorooinka dadban, iyo Guddoomiyihii Guddiga Heer Federaal FEIT, waxaana la rumeysan yahay in dib loogu laaban doono doorashadiisa.